» Askar aad ubadan oo Puntland kaga geriyootay qarax ka dhacay Wadada isku xirta Boosaaso iyo Galgala
Askar aad ubadan oo Puntland kaga geriyootay qarax ka dhacay Wadada isku xirta Boosaaso iyo Galgala
December 5, 2012 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareQarax xooggan ayaa ciidamada Puntland lagula eegtay deegaan udhaxeeya Magaalada Boosaaso iyo Buuraha Gal-gala ee ee gobolka Bari.
Wararka ina soo gaaraya ayaa sheegaya in qaraxaas uu ahaa bambo nooca dhulka lagu aaso ah oo la doonayay in ciidamadan lagu qarxiyo.
Ku dhawaad 10 kamid ah ciidamada Puntland ayaa lasoo sheegayaa in ay geeriyoodeen kuwa intaas ka badana dhaawac ahaan loo qaaday.
Sargaal katirsan ciidamada amaanka Puntland ayaa sheegay in qaraxan lala beegsaday ciidamada, ayna ka danbeeyeen rag nabad diid ah sida uu hadalka udhigay.
Halka qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa horey loo sheegay in ay uga dhici jiren falal aman xumo ah oo qaarkood lala beegsan jiray ciidamada amaanka Puntland.
7 Responses to Askar aad ubadan oo Puntland kaga geriyootay qarax ka dhacay Wadada isku xirta Boosaaso iyo Galgala
Galmudug says:	December 5, 2012 at 14:41	Maya mahan waa isku dir cadowga uu wado hada madaxweynuhu wuxuu turkiga u jooga in magaalada kismaayo ay tagaan shirkadii dhisilahaad magaalada
Reply	Run sheg says:	December 5, 2012 at 14:51	Farole mucaaradka muwadinka ah ha iska xaliyo shacabka rer butland cadalad ha u horseedo kibirka ha is ka dayo ayaga la shaqayn dona o boliska la shaqayn dona
Reply	maxamud cali cumar says:	December 5, 2012 at 15:29	Kibirka waa lagu kufaa ,lugana jaba ee waxaan kala talinayaa ciidamada loo aasay in wadaada qaar ay la dagaalamaan,qaarna ay miciinaan inay joojiyaan,haddii kale waxaan ka digaa tan iyo mid ka sii xun. Maamulka Puntland ee faroole ha joopjiya dadka reer koonfureedka uu guryaha kala baxiyo isagoo ku naaneesayo waa alshabaab si uu u xalaalaysto inuu dilo ama xero. Ciidamada Ps ee faroole ha ogaadeen inay u dhimanayaan faroole iyo qabiil, waana aduun iyo aakhiro khasaar ah sidoo kale waxan idiin sheegayaa marka hore waxaan ugaarsaneyseen reer baydhabo,bakool iwm,haddana waxaad bilowdeen inaad ugaarsataan qabiiladii idin la degay gaalkacyo weliba ku xadgubtaan dhulal aadan maamulin laakiin jwaabta aad hesheen waad og tihiin ,madaxdiina idiin ma sheegin marka hoosha ugaarsiga aad wadaan joojiya inta ayaadan god dheer gelin.
Reply	SOAMLIALAND says:	December 5, 2012 at 15:34	iygiibaa baqtigoodii iskaga tilaabsaday waanu soo dhweynenaa cadowga baa bay
Reply	Wil absame says:	December 5, 2012 at 15:43	Ha ala maxay dad xirxiren amxar ka gaten kuwas an nacy caku pumtland
Reply	cabdulkadir Wadani. says:	December 5, 2012 at 18:55	cadaaladu waa sinaan, waayo shereecadu waxay sintaa cid kasta xaquuqdeeda, puntiland maxaa diidaya inay arkaan wixii ku dhacay gobalada hawiye iyo raxanwayn, iwm maantaan ku qanacsanahay arimahaan, afka lagu wada qancii karo ah
Reply	Darwiish says:	December 6, 2012 at 13:04	Wallee isaaq iyo habar gidir cuqdad puntland ayay u dhimanayaan hadad rabtaa inad qaxdan xamar ayaan imaanayaaa sidii 2007